DINIKY NY FO | 3
harilova | 11 Oktobra, 2008 20:42
Tsy ny olona rehetra no mino ny lanitra, tsy ny rehetra no mino ny fiainana any an-koatra! Saingy ho an'izay tsy mino izany dia tsy misy dikany akory ny hiaina sy ny hiezaka hanao ny soa main'ny fiainana! Raha tsy misy ireo fanahy mitsinjo antsika eny ho eny! Na isika koa aza tsy mba ho afaka mifaly amin'izay hahitantsika ny soa apetratsika ho an'ny taranaka amam-para. Izany Fiainanana mandrakizay izany no fanasana homanin'i Kristy Ho antsika.
Rahefa miresaka fanasana isika dia mazava loatra fa tsy maintsy misy fifidianana izany. Iza no hantsoina? Sao adino ny manasa an’i…! Mazàna dia ny manan-kaja sy ny manan-katao no voalohan-disitra, inona no antony? Adino ary toa odiana tsy hita ny hafatr’i Kristy manao hoe : “Raha manasa olona hisakafo antoandro na hariva hianao, aza dia ny sakaizanao na ny rahalahinao na ny havanao na ny mpanan-karena mifanakaiky aminao no asaina, fandrao asain'ireo koa hianao ka ho voavaliny izay nataonao taminy.” (Lk 14,12)
Na izany aza anefa, mba hanoharan’i Kristy ny Fanjakan’ny lanitra amin’ny fanasana azon’ny saintsika takarina dia nolazainy fa voaasa ho amin’ny Fanjakan’ny Mpanjaka ireo mihevi-tena ho lohalisitra amin’ny fanasana, saingy noho ny avonavona dia niala tsiny ho manan-draharaha atao avokoa. (Evanjely Mt 22, 1-14). Tsy ho voninahitry ny Mpanjaka mpanasa anefa ny famaliana ny fanasany fa ho reharehan’izay notsongoim-bolo ho any amin’ny fanjakana.
Dia toy izany koa ny fiainantsika, “satria na tsy mila fankalazana avy aminay aza ianao dia ekenao ary sitrakao ny ankalazanay anao, tsy mampitombo ny hasinao ny fiderana atona fa manampy anay kosa hahazo ny famonjena, amin’ny alalan’i Kristy”. Voaantso ho amin’ny fanasana isika rehetra, tsy zo hiriariavana anefa izany fa adidy mampandinin-tena mandrakariva. Ilay akanjon’ny fampakarana (fanasana) izay noraisintsika tamin’ny batemy manko dia mila tahirizintsika mandrakariva hoenti-miseho eo amin’ny latabatry ny Mpanjaka.
Tsy azo vidiam-bola araka izany ny fanjakan’ny lanitra ary tsy maimaim-poana koa, mety hamoizana izay rehetra hananana aza mba hahazoana azy (alahady 17A). Tsy misy hireharehana na hieboheboana anefa izany. Matoa isika mahefa ny soa dia “miaraka amin’ilay mankahery antsika” (Vak II Fil 4, 12-14.19-20). Tsy azotsika hohadinoina anefa fa ilay mpiandry antsika hoy ny Salamo setriny (Sal 22) dia mitondra tsora-kazo aman-tehina: ny tsorakazo hanitsiana ny dian’izay mania, ny tehina mahafa-tahotra amin’ny fahavalo. 
Tsy zava-bita hifampitsarana anefa ny hazakazaka ho amin’ny fanjakan’ny lanitra, ka ho ampy ny manao soa be dia be! Tsy ny zoa vita no hidirana any an-danitra fa ny faharetana amin’ny fanaovan-tsoa! Aza adinontsika ny vakiteny roa alahady lasa izay , na ny Evanjelin’ireo niasa tany an-tanimboaloboka adiny iray monja. “Horovitina eo amin’ny tendrombohitry ny Tompo ny voaly manarona ny olona rehetra” (Vakiteny I Iz 25, 6-10) ka “hihanjahanja sy hiarihary eo imason’Izy hampamoaka antsika ny zavatra rehetra” (He 4, 13).
Ny Eokaristia no hisantarantsika sahady ny fanasan’ny zanak’ondry. Alao hery ary ny hitahiry ilay “akanjo fotsin’ny Batemintsika”, mba hahafahantsika mitoetra ao amin’ny fanasany na dia eo aza ny tsy fahamendrehana hibaboantsika ka niantsoany antsika hiombona anjara amin’ny Fanjakany. Hodinihintsika manokana ilay fitalahoan’ilay Tomponjato lazaintsika isaky ny handray komonio hoe : Tompoko, tsy mendrika ny hampiantrano anao aho, fa ny Teninao ihany no hahasitrana ny mpanomponao (Mt 8, 8).
 Prefasy andavanandro faha IV
 Jereo ny alahady fankalazana ny Mpiandry ondry tsara (jereo eto) manazava io ny naoty 4
 Alahady faha-26 A (Ezekiela 18, 25-28)
harilova | 10 Aogositra, 2008 08:30
Ny andron'ny 10 aogositra no itsingerenan'ny taona nahitan'i Diego Diaz an'i Madagasikara ny taona 1500. Ny anarana hoe Madagasikara dia efa ny faramparan'ny taonjato faha-18, araka ny fikarohana nataon'i Marco Polo, fa nosy Md Laurent no niantsoana azy talohan'izay, satria ny 10 aogositra no ankalazan'ny litorjia katolika ny fetin'ity martiora romana ity (+258).
Tantara ianarana tamin'ny garabola izany saingy rehefa mandeha ny taona dia tsara ihany ny mamerimberina azy satria ny fanadinoana na tsy azontsika iniana aza (satria tsy misy mahavita minia manadino, tsy azo kosehina ny eritreritra) dia tonga ho azy kosa amin'ny lafin-javatra sasany!
Ny fivoaran'ny teknolojia no nahazoantsika ny sarintany izao fa mba saintsaino an-tsaina ny saritany nataon'ny mpiantsambo namaritany ny mety ho endrik'ilay nosy faha-4 lehibe indrindra eran-tany...
harilova | 06 Aogositra, 2008 08:53
Na dia hoe an-dafy aza no hilazana ny aty amin'ny misy anay aty dia ny fimenomenomana amin'ny hasarotan'ny vidim-piainana misy hatraiza hatraiza...
Ny mahagaga a nefa dia tsy ho sanatria ny tsy fananam-bola no tsy hisintahana kely any an-toeran-kafa mba hiala voly... vacances ! hoe...
Ny mahalasa ny saiko indrindra indrindra dia ny fiantraikan'izany eo amin'ny lafim-piainana rehetra, na amin'ny arak'asa na amin'ny ara-tsaina fa indrindra amin'ny ara-panahy! Ny Fiangonana zara raha misy ora hisokafany, afa-tsy ireo Fiangonana manan-tantara, tsidihin'ny Mpivahiny sy Mpizahatany (pèlerins et touristes)... asa angaha noho ny vola kely mba ampidirin'ny rakitra ao koa! Iza no mahita?
Ny Mpiangona koa moa, na ny alahady aza tsy hita hoe aiza no misy azy!
Fa ny mahatsikaiky, rehefa mifanala eo diamahita hevitra ny Mpitondra fivavahana sasany hoe: 'Ndao hianatra an'i Jesoa hitory teny eny amoron-dranomasina! Dia hoy ny sasany hoe olona miboridana ve no hampivavahana tsy hanahirana!
Ny an'ny Mompera iray dia hevi-dratsy iray ihany no mameno ny sainy raha sanatria izany no ho tanteraka, satria ny mpiangona miboridana! inona ary hoy ianao izany hevi-dratsy mameno ny sainy izany?
Tsy azonao veroka mihitsy angamba satria zavatra hafa no heverinao! Amin'ny fotoanan'ny rakitra, lasa ny sainy hoe : aiza no hangalany ny vola hataony rakitra!
Aza misy anie izany!
harilova | 13 Jolay, 2008 09:15
Saika mba ho any Sidney aho ry 'reto dia nanao kaonty dia hoe ohatrinona ny vola lany amin'io? Fihaonana ve io sa vacances? Asa re! Azon'ny fakam-panahin'i Jodasy aho hoe : raha mba izao no hanasoavana ny mahantra!
jereo eto ny tohiny fa tena tsiss fotoana firy! sao miakatra eto ny fakitiora! Dia veloma be ho an'izay tsy mankany Sidney miaraka amin'ny Papa!
harilova | 04 Jolay, 2008 11:22
Tsy niala ny trano aho tamin'ny herintaona nandritra ny hafanam-ben'ny été! Dia izay ny vacances! Fialam-boly mandreraka fa mipetraka fotsiny dia malemin'ny hafanana ho azy eo! Dia tsy niala voly fa nila voly!
Mba nanomboka nandamina fandaharam-potoana ihany aho tamin'ity taona ity! Maro no miandry hoe hody kely any Dago ve sa tsia! Dia tsy hisy aloha io fa efa tsara petraka aty antampon-tendrombohitra aho, maka rivotra (fa matahotra hidiran'ny rivotra)!
Iray volana no aty, miara-miaina amin'ny ankizin'ny ambanivohitra, mihanika tendrombohitra sy mandeha an-dranomasina! Ireo fialam-boly roa lehibe handaniana ny été (fahavaratra sa inona? nefa tsy misy varatra manko)!Ny vazaha mitanin'andro mba hivoara-mena! izaho mamonjy aloka mba ho fotsy hatsatra! dia mba mitovitovy avy eo! Ny tena mahafinaritra ahy dia ny fahatsiarovana ny fandehanana amin'ny cyber tany dago mba hifandraisana amin'ny havana aman-tsakaiza: tsy misy net manko ny tranohipetrahakoka mila mifindra toerana vao mahazo!
Dia hoy aho hoe : ny aza mba zatra (na tsara na ratsy) ihany fa dia mahafinaritra ny mamola-tena! Miala tsiny ho an'izay mandefa mailaka fa hovaliany ho azy ao izany hatramin'ny faran'ny volana jolay! Izay hametraka hafatra dia amin'ny herinandro indray mihaona!
Vakansa kely izany aloha i Harilova e!